Fantaro i Victoria Tinta, Tonian-dahatsoratra Aymara, Izay Mahita An’Izao Tontolo Izao Amin’ny Alalan’ny Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraVictoria Gimena Tinta Quispe
Voadika ny 22 Mey 2017 15:09 GMT
Victoria Tinta – Tonian-dahatsoratra Lingua Aymara – nandritra ny Fihaonamben'ny Global Voices tao Cebu, Filipina, taona 2015. Sary nalain'i Laura Schneider.
Lazao anay fohifohy ny momba anao sy ny fomba nidiranao tato amin'ny GV.
Ny tenindrazako, Aymara no tena mahaliana ahy, Liam-baovao ihany koa aho, amin'izay, maharaka ny zava-mitranga manerantany.
Lazao aminay azafady ny dingana amin'ny fandraisanao anjara ao anatin'ny Global Voices. Nanova ny fijerinao izao tontolo izao nandritra izany fotoana izany ve ny traikefanao amin'ny fandikan-teny, fanoratana sy ny fanitsiana lahatsoratra?
Tena midadasika tokoa ny zavatra niainako tamin'ny fandikan-teny, saingy tsy mora adika amin'ny teny Aymara ny famintinana voalohany satria nisy ireo teny ara-teknika sy ara-teknolojika tsy misy amin'ny teny Aymara. Noho izany, tsy mora ny mieritreritra ny fomba hanehoana azy. Ho an'ny teny Aymara, mitaky fotoana bebe kokoa tsy mitovy amin'ny teny Espaniola izany. Amin'ny fandikan-teny sasany, tsy mahatakatra tsara izay voasoratra aho, ary indraindray tena tsy mazava mihitsy izany. Tany am-piandohana, nihevitra fa nanao izay mety aho. Nanomboka ny zava-tsarotra raha nahita fahadisoana aho. Amin'izao fotoana izao, mifidy lahatsoratra azoko tsara aho. Vakiako aloha izany, ka rehefa mazava amiko, dia adikako.
Misy fiantraikany eo amin'ny asanao ve ny asanao ato amin'ny GV? Nanova betsaka ny faritra misy anao, andeha atao hoe, nanomboka tamin'ny taona 2009 ve ny sehatra media sosialy?
Tsy dia tena nisy tamin'ny taona 2009; Fa ankehitriny, eny.
Afaka milaza ny fomba hitantananao ny fotoananao manokana amin'ireo asa rehetra ireo ve ianao, anisan'izany ny asanao amin'ny maha mpandala ny teny? Misy torohevitra ve?
Manatontosa ny asa fandikan-teny aho ankoatra ny andro sy ora fiasàna, Manao ny fandikan-teny an-tsitrapo kosa aho rehefa malalaka.
Ahoana no nahatonga izany faniriana izany nitondra anao ho aty amin'ny Global Voices?
Tiako ny mandika vaovao amin'ny teny Aymara, ary manome fahazavana ho an'ny olona ny Global Voices izay tsy mitovy amin'ny haino aman-jery hafa izay tsy mitatitra amin'ny fomba fijerin'ny GV.
Inona no traikefanao taloha amin'ny fandikan-teny? Samihafa amin'ny nataonao taloha ve izany?
Nandika izay lahatsoratra nahasarika ny saiko aho taloha, saingy sendran'ny teny ara-teknikina sarotra hadika. Ankehitriny, tsy mifidy lahatsoratra aho raha tsy mamaky izany ary mahazo antoka fa mazava amiko tanteraka ny lahatsoratra.
Ny traikefanao ao amin'ny GV, mino ve ianao fa mahasoa izany amin'ny lafiny hafa?
Tena mahasoa izany
Nahoana ianao no mihevitra fa tokony hamaky GV amin'ny tenindrazanao ny olona eny an-dalambe?
Zava-dehibe ny lahatsoratra izay nosoratana sy nadika tamin'ny teny Aymara. Raha mamaky GV Aymara ianao, afaka mahazo vaovao momba izay zava-mitranga manerantany.
Ahoana no nanapahanao hevitra hanomboka handika teny ato amin'ny Global Voices?
Tsotra fotsiny, tiako ny mandika teny
Inona no ataonao rehefa tsy mandika teny?
Rehefa tsy mandika teny aho, dia manao ny zavatra fanao andavan'andro.
Inona no nofinofinao?
Manohy miasa, mahazo mpilatsaka an-tsitrapo bebe kokoa ho an'ny Lingua Aymara. Mba hahazo vaovao bebe kokoa na rehefa tsy nandre vaovao na tsy nijery fahitalavitra aho, dia miditra GV mba hijery vaovao sy ny zava-mitranga ao Venezoelà, ohatra.
Inona no tianao handaniana ny fotoana malalaka? Omeo ohatra izahay.
Malalaka aho rehefa tsy misy asa, saingy tsy mitranga matetika izany. Indraindray, adiny iray na adiny roa izany, ary amin'izany fotoana izany, manohy mandika na manitsy lahatsoratra alefan'ireo mpandika teny an-tsitrapo aho.
Ahoana no fahitanao ny fivoaran'ny GV Lingua ao anatin'ny taona vitsy manaraka?
Mahita aho fa misy ny fivoarana, na dia mbola misy aza ireo fiteny marobe tsy hita ao amin'ny GV.
Ao anatin'ny zavatra ahianao ny fahamaroan-teny. Nahoana no zava-dehibe ny fahamaroan-teny?
Matoa izy mampiahiahy ahy, dia zava-dehibe ny mahafehy teny maromaro mba hananana fifandraisana mivantana amin'ny olon-kafa.
Inona no toe-panahin'ny GV?
Ny fomba fisainan'ny GV amiko dia ny herin'ny asa an-tsitrapo ataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo rehetra manerantany izay tia ny tenin-drazan'izy ireo, ary mamoaka lahatsoratra sy mandika izany amin'ny teny samihafa.
Ahoana ny fomba hisafidiananao lahatsoratra hadika ary nahoana ianao no nisafidy handika an-tsitrapo amin'izany?
Misafidy lahatsoratra izay misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina aho. Tiako ny mandika vaovao bebe kokoa.
Nandika teny tato amin'ny GV nandritra ny taona maro ianao, inona no lazainao ho an'ireo izay vao manomboka?
Ho an'ireo izay manomboka, tiako ny milaza amin'izy ireo fa hahazo traikefa marobe avy amin'izao tontolo izao izy ireo
Lazao anay ny momba ny tanàna onenanao. Ary ahoana ny fomba hamaritanao ny firenenao amin'ny vahiny?
Manana kolontsaina, nahandro, fambolena, dihy sy biby fiompy, ankoatra ny hafa ny fireneko, misy ny fahasamihafana ara-piteny, izay manana teny ofisialy 37 ny firenena.
Misy zavatra tianao hanampiana?
Te-hilaza amin'ireo mpikambana manerantany ao amin'ny GV aho mba handroso amin'io asa an-tsitrapo io, ary hilaza aminao ny mpitarika hoe misaotra noho ny fahatakarano, indrindra ho an'i Mohamed izay nahatakatra zavatra betsaka momba ny toe-javatra niainako, indraindray rehefa tsy afaka mandefa ny tatitrako noho ny antony maro aho.